Shir lagaga hadlay Xaalufka oo ay soo qaban qaabiyeen Dalada HON ayaa ka dhacay Degamada Dhahar ee G/ Sanaag | maakhir.com
Shir lagaga hadlay Xaalufka oo ay soo qaban qaabiyeen Dalada HON ayaa ka dhacay Degamada Dhahar ee G/ Sanaag
March 7, 2008 in Somalia
Dhahar:- Shir ay soo qaban qaabiyeen Bahada Dalada Dhahar Organization Neqor oo loo soo gaabiyo HON,shirkaasi ayaa waxa lagag hadlayay arimo badan oo ay ugu wayn tahay Xaalufka sidii looga hor tagi lahaa,iyada oo ay shirkaas goob joog ka ahaayeen in ka badan 12- Nabadoon oo aad looga yaqaan deegaankaasi.
Shirkaas ayaa ugu horayn waxa ka hadlay Xildhibaan Siciid Xasan Shire oo ka mid ah Baarlamaanka Dawlada Somaliya, xildhibaanka ayaa u mahad celiyay dhamaan dadkii madashaasi joogay isaga oo aad uga sheekeeyay muhiimada ay leedahay in shirkaasi aad looga soo qayb galo.
Mr Siciid waxa uu hoosta ka xariiqay mar uu ka hadlayay Xaalufka inay lagama maar maantahay in laga hortago wax alaale wixii deegaanka dhawaaca u keenay isaga oo mahad balaadhan u soo jeediyay ciidanka ka horta xaalufka ee deegaankaasi ku sugan, xildhibaanku waxa kale uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in dadka lagu wacyi galiyo inay ka shaqeeyaan Nabada iyo sidii loo gaadhi lahaa hormar fiican oo dhamaan gobolka oo dhan saameeya.
Waxa isna halkaasi joogay oo shirkaas lagu soo dhaweeyay Suldaan C/laahi Cartan oo ka mid Isimada Deegaanka Sanaag sida wayn looga qadariyo,isaga oo aad ugu nuux-nuuxsaday qaabka fiican oo ay dhalintaasi u soo qaban qaabiyeen Barnaamijkaasi.
Suldaanka ayaa sidoo kale sheegay inuu Deegaanka Dhahar iyo nawaaxigeeda aad loogu amaano ka horta xaalufka iyo waliba ka shaqaynta Amaanka oo deegaankaasi aad uu ugu caan baxay, suldaanka ayaa sidoo kale soo qaatay qaabka wacan oo ay u shaqeeyaan ciidanka isku duuban ee ka horta xaalufka kuwaasi oo u dhiiri galiyay inay sii wadaan shaqada ay u hayaan Dalkooda iyo dadkoodaba.
Nabadoon Saxardiid Cali Dhawaaq ayaa isna goobtaasi ka hadlay isaga oo dhamaan u mahad celiyay marti sharaftii kulankaasi ka soo qayb gashay,waxa uu sheegay inay looga baahan yahay Nabadoonada iyo dhamaan qaybaha kale ee Bulshada inay la shaqeeyaan dhalinta si loo gaadho Barwaaqo.
Guntii iyo gaba gabadii waxa halkaasi kadal kooban ka soo jeediyay Maxamed Cali Samatar oo ka mid ah Aasaasayaashii Daladaasi isla markaana ah dhalinta fir fircoon ee deegaanka Sanaag aadka looga dameeyo, waxa uu sheegay inay daladaasi muhiimada wayn u leedahay dhamaan buslahada deegaan isaga oo xusay inay dhawaan dhisayaan Dalada guud oo midaysa dhamaan Gobolka oo dhan taasi oo ay aad u soo dhaweeyeen dhamaan dadkii halkaasi joogay.
« Ciidamada Itoobiya ayaa gudaha ugalay Deegaanka Wela-weyn ee Gobolka Sh/Hoose
Uganda ayaa walaac ka muujisay sii joogitaanka Ciidamadeed ee Gudaha Dalka Somaliya »